OLAC Record: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 023, face B
Title: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 023, face B
Abstract: Un homme (le même que dans l’enregistrement BER 023A, répétant deux fois la même phrase) décrit une cérémonie de mariage (de0à 5.10 min.) Ensuite, il décrit les environs du village de Thagyigon (près de Hmawbi) et sa situation géographique, social et commerciale (de 5.13 min. à 18 min.). Il décrit le mortier du village et la manière dont les villageois pilonnent le paddy et le enlèvent la balle. Il décrit ensuite les différents types de nouilles de riz, la façon de les manger, et parle des poisson d’eau douce (de 19 à 28 min.). Il continue en parlant des méthodes de pêche et de pisciculture des Karen (bouddhistes) (de 29 à 34 min., le son est ensuite coupé). (l’enregistrement reprend à 1h06 min.) à propos de la pêche à l’écrevisse, du poisson, des grenouilles (on entend des chants de grenouilles en saison des pluies), le nom des outils utilisés à Hanthawaddy, Inthada (jusqu’à 1h08 min.), la préparation du jus de tamarin et des feuilles de thé marinées (de 1h08 min. à 1h14 min.) Il parle ensuite des enfants, de leur âge, de leurs jeux (de 1h14 min. à 1h29 min.) et de la préparation du mohinga (1h29 min. à 1h37 min.).
A man (the same as in recording BER 023A, repeating two timesasame sentence) describesawedding ceremony (from0to 5.10mn). Next, he describes the surrounding of Thagyigon village (near Hmawbi) and its geographical, social and commercial situation (from 5.13mn to 18mn). He describes the collective mortar of the village and the way people pound paddy and husk the rice. He then describes the different rice noodles, the way to eat them, and talks about river fish (19 to 28mn). He goes on about fishing practice and fish farming of Karens (Buddhist) (29 to 34mn, the sound is then cut). (it starts again at 1h06mn) about prawn fishing, fish, frogs (sound of frogs in the rainy season), the names of tools used in Hanthawaddy, Inthada (until 1h08mn), preparation of tamarind juice and Burmese pickled tea leaves (from 1h08 to 1h14mn). He talks about children, their age, their games (from 1h14mn to 1h29mn) and preparation of mohinga (1h29mn to 1h37mn).
အမျိုးသားတဦးက (အသံသွင်းချက် BUR-023 A ကဲ့သို့ ဝါကျတကြောင်းကို နှစ်ကြိမ်စီရွတ်ဆိုသည်) မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပပုံကို ဖော်ပြပြောကြားသည်။ ( ၀ မှ ၅.၁၀ မိနစ်အထိ။) ထို့နောက် သူသည် တပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ(မှော်ဘီအနီး)၏ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား ပထဝီအနေအထား၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေအနေ များကို ဖော်ပြပြောကြားသည်။ ( ၅.၁၃ မိနစ် မှ ၁၈ မိနစ်အထိ။) ဆက်လက်၍ သူသည် ကျေးရွာ၏စုပေါင်းမောင်းဆုံတွင် စပါးနှင့်သီးနှံများကိုအခွံချွတ်မောင်းထောင်းပုံများကိုဖော်ပြသည်။ ထို့နောက် ၎င်းသည် ဆန်နှင့်ပြုလုပ်သော မုန့်ဖတ်အမျိုးမျိုး၊ ယင်းတို့ကိုစားသုံးပုံ နှင့် မြစ်ငါးအကြောင်းကိုပြောဆိုသည်။ ( ၁၉ မိနစ် မှ ၂၈ မိနစ်အထိ။) ဆက်လက်၍ငါးဖမ်းသည့်အလေ့အထနှင့် ကရင်(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်)တို့၏ ငါးမွေးမြူရေးအကြောင်း တို့ကိုပြောသည်။ ( ၂၉ မိနစ် မှ ၃၄ မိနစ်အထိ၊ ထို့နောက်အသံပြတ်သွားသည်။) ( ၁ နာရီ ၀၆ မိနစ် ၌ပြန်လည်စတင်သည်)ဟံသာဝတီ၊ ဟင်္သာတ အရပ်ဒေသများတွင် ပုဇွန်၊ ငါး ၊ ဖားများ (မိုးရာသီတွင်ဖားများ၏အော်သံများ) ဖမ်းရာတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာများ၏အခေါ်အဝေါ်များ(၁ နာရီ ၀၈ မိနစ်)၊ မန်ကျည်းဖျော်ရည်နှင့် မြန်မာ့လက်ဖက်သုပ် ပြုလုပ်နည်းများကိုပြောသည်။ ( ၁ နာရီ ၀၈ မိနစ် မှ ၁ နာရီ ၁၄ မိနစ်ထိ။) သူသည်ကလေးများအကြောင်း၊ သူတို့၏အသက်အရွယ်၊ သူတို့၏ကစားနည်းများ ( ၁ နာရီ ၁၄ မိနစ် မှ ၁ နာရီ ၂၉ မိနစ်ထိ) နှင့် မုန့်ဟင်းခါးချက်ရာတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပုံများနှင့် မုန့်ဟင်းခါးပြင်ဆင်ပုံများကို ဖော်ပြပြောဆိုသည်။ ကိုပြောပြသည်။ ( ၁ နာရီ ၂၉ မိနစ် မှ ၁ နာရီ ၃၇ မိနစ်ထိ)။
Alternative Title: Fonds Denise Bernot, Burmese, 1964, tape 023, side B
Description: Un homme (le même que dans l'enregistrement de la face B ( Bande 023A), qui répète toujours les phrases deux fois) décrit une cérémonie de mariage, où se tient le marié et la mariée, comment ils se prennent la main pour entériner le mariage, comment il est crié ''victoire'' trois fois ensuite, comment se tiennent les garçons et les demoiselles d'honneur, les rituels (beitheik) fait à ces occasions (de0à 5.10mn). Description des environs du village de Thagyigon (près de Hmawbi) et de la situation géographique; l'homme raconte qu'il veut se rendre au-delà du village; que se trouve des Karen, des bouddhistes, des chrétiens dans ce village; village de 5000 habitants; il parle des plantations, des cultures, du prix des maisons, de la coopérative agricole, du commerce avec Rangoun, du prix des denrées, du calendrier agricole, de la productivité en 1964. (de 5.13mn à 18mn). Décrit le pilon collectif du village et la manière de piler le riz (blanchir le riz), la manière dont les femmes séparent la balle du grain; décrit ensuite différentes nouilles de riz, façon de manger; des poissons de rivières (19 à 28mn). Des pratiques de pêche et de pisciculture des Karens bouddhistes (29 à 34mn, bande son coupée ensuite). (bande son reprend à 1h06mn) pêche des écrevisses, des poissons, des grenouilles (son des grenouilles pendant la saison des pluies) des noms des outils à Hanthawaddy, Inthada (jusqu'à 1h08mn). Va chez Ma Sein, manière d'accueillir des invités avec un jus de tamarin en Birmanie centrale, raconte comment fabriquer ce jus, acidité et vertus laxatives du jus, thé au lait (let phek ye), comment le préparer, différences entre préparations du pays shan et birman (de 1h08 à 1h14mn). Parle des enfants, de leur âge, de leurs jeux (de 1h14mn à 1h17mn). Parle de la façon de jouer avec des fruits du gongnin (Enthada pursaetha), sortes de gros marrons plats , jeu surtout apprécié des filles (1h17mn à 1h29mn). Va servir du Mohinga ce dimanche pour l'anniversaire de son plus jeune enfant, va aller au marché de Hmawbi pour les ingrédients, des prix; de la manière de préparer le mohinga dans des pots de tailles différentes (1h29mn à 1h37mn).
A man (the same as in recording BER 023A, repeating two timesasame sentence) describesawedding ceremony, where the bride and the groom have to stand, how they hold each other's hand to celebrate the wedding, how they shout ''victory'' three times, what the bridesmaids and best men are supposed to do, and the rituals (beitheik) executed on this occasion (from0to 5.10mn). Description of the surrounding of Thagyigon village (near Hmawbi) and its geographical situation; the man says he wants to go beyond the village; then he explains there are Karen, Buddhists, Christians in this village; it isavillage of 5000 inhabitants; he then talks about the plantations, crops, the price of houses, of the agricultural cooperative, of the trade with Yangon, the prices of goods, the agricultural calendar, and of the productivity in 1964 (from 5.13mn to 18mn). He describes the collective mortar of the village and the way people pound paddy and husk the rice. He then describes the different rice noodles, the way to eat them, and talks about river fish (19 to 28mn). He goes on about fishing practice and fish farming of Karens (Buddhist) (29 to 34mn, the sound is then cut). (it starts again at 1h06mn) about prawn fishing, fish, frogs (sound of frogs in the rainy season), the names of tools used in Hanthawaddy, Inthada (until 1h08mn). He goes to Ma Sein, and describes the way she welcomes her guests withatamarind juice (she lives in central Burma), how to prepare the juice, the acidity and the potent laxative effect of the tamarind juice. He then talks about the Burmese tea (let phek ye) and how to prepare it, the difference between the preparation in the Shan state and in Burma (from 1h08 to 1h14mn). He talks about children, their age, their games (from 1h14mn to 1h17mn). He talks about how they play with fruits of gongnin (Enthada pursaetha), sort of big flat chesnuts. Girls often play this game (1h17mn to 1h29mn). The man then announces he intends to serve Mohinga (fish soup with noodles) on Sunday for his younger child's birthday. So he has to go to the market in Hmawbi to buy the ingredients, he describes the prices, the way he has to prepare the Mohingace in pots of different sizes (1h29mn to 1h37mn).
အမျိုးသားတဦးက (အသံသွင်းချက် BUR-023 A ကဲ့သို့ ဝါကျတကြောင်းကို နှစ်ကြိမ်စီရွတ်ဆိုသည်) မင်္ဂလာအခမ်းအနားတခုအကြောင်းကိုပြောပြသည်မှာ မည်သည့်နေရာတွင် သတို့သမီး သတို့သားတို့ မည်သို့နေရာယူရပုံ၊ မင်္ဂလာပွဲတွင် လက်ကိုတဦးနှင့်တဦး မည်သို့ကိုင်၍ ဆင်နွှဲကြပုံ၊ 'အောင်ပြီ'ဟုသုံးကြိမ်တိုင် မည်သို့ကြွေးကြော်ကြပုံ၊ သတို့သမီးအရံနှင့် သတို့သားအရံတို့က မည်သို့ပါဝင်အားဖြည့်ကြပုံနှင့် ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများအရ(ဘိသိက်) မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ကြရပုံတို့ကို ပြောဆိုသည်။ ( ၀ မှ ၁ နာရီ ၅.၁၀ မိနစ်ထိ။) တပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ (မှော်ဘီအနီး) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပထဝီအနေအထားကိုဖော်ပြပြောဆိုပြီး၊ ၎င်းသည် ကျေးရွာအလွန်ထိသွားလိုကြောင်း၊ ထို့နောက် ထိုရွာတွင် ကရင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့၏အကြောင်းများကိုရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။ ရွာတွင် လူဦးရေငါးထောင်မှီတင်းနေထိုင်ကြကြောင်း၊ ထို့နောက် စိုက်ပျိုးပင်များအကြောင်း၊ သီးနှံများ၊ အိမ်များ၏စျေးနှုန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးသမဝါယမအသင်းအကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ဆက်သွယ်မှုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းတို့၏စျေးနှုန်းများ၊ ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးမှုများနှင့် ၁၉၆၄ ခုနှစ်အတွင်း ထွက်ကုန်များအကြောင်းပြောကြားသည်။ ( ၅.၁၃ မိနစ်မှ မှ ၁၈ မိနစ်ထိ။) သူသည် ရွာ၏စုပေါင်းမောင်းဆုံရှိသောနေရာနှင့် ရွာသူရွာသားများ စပါးနှင့်သီးနှံများကိုအခွံချွတ်မောင်းထောင်းကြပုံတို့ကို သရုပ်ဖော်ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ဆန်ဖြင့်ပြုလုပ်သော မုန့်ဖတ်အမျိုးမျိုး၊ ယင်းတို့ကိုစားသုံးပုံ နှင့် မြစ်ငါးအကြောင်းကိုဖော်ပြပြောဆိုသည်။ ( ၁၉ မိနစ်မှ မှ ၂၈ မိနစ်ထိ။) သူသည် ဆက်လက်၍ ငါးဖမ်းသည့်အလေ့အထနှင့် ကရင်(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်)တို့၏ငါးမွေးမြူခြင်းအကြောင်းကိုပြောသည်။ ( ၂၉ မိနစ်မှ မှ ၃၄ မိနစ်ထိ၊ ထို့နောက်အသံပြတ်သွားသည်။) (၁ နာရီ ၆ မိနစ်တွင်ပြန်လည်စတင်သည်)ဟံသာဝတီ၊ ဟင်္သာတ အရပ်ဒေသများတွင် ပုဇွန်၊ ငါး ၊ ဖားများ (မိုးရာသီတွင်ဖားများ၏အော်သံများ) ဖမ်းရာတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာများ၏အခေါ်အဝေါ်များ ကိုပြောသည်။ ( ၁ နာရီ ၈ မိနစ်ထိ။) သူသည် မစိန်ထံသို့ သွားလည်သည်။ ပြီးနောက် သူမကဧည့်သည်များကို မန်ကျည်းဖျော်ရည်ဖြင့် ဧည့်ခံကြိုဆိုပုံ (သူမသည် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း၌နေထိုင်သည်)၊ ဖျော်ရည်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ပုံ၊ မန်ကျည်းဖျော်ရည်၏ အချဉ်ဓာတ်နှင့် ဝမ်းနုတ်ဆေးကဲ့သို့ ထိရောက်စွာဆေးဘက်ဝင်ပုံတို့ကိုပြောသည်။ ထို့နောက် မြန်မာ့လက်ဖက်ရည်နှင့် မည်သို့ဖျော်စပ်ပုံ၊ ရှမ်းပြည်နှင့် ဗမာပြည်မတို့၏ ကွဲပြားသောဖျော်စပ်ပုံတို့ကိုပြောဆိုသည်။ ( ၁ နာရီ ၈ မိနစ်မှ ၁ နာရီ ၁၄ မိနစ်ထိ။) သူသည် ကလေးများ၊ သူတို့၏အသက်အရွယ်များ၊ သူတို့၏ကစားနည်းများအကြောင်းကိုပြောဆိုသည်။ ( ၁ နာရီ ၁၄ မိနစ်မှ ၁ နာရီ ၁၇ မိနစ်ထိ။) သူသည် ကလေးများ ဂုံညင်း ဒိုးပစ်ကစားပုံ၊ (သစ်အယ်သီးအမျိုးအစားဝင်ဖြစ်ပြီး ကြီး၍ ပြားသော ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။) မိန်းကလေးများလည်း ထိုကစားနည်းကို ရံဖန်ရံခါ ကစားကြပုံတို့ကိုပြောသည်။ ( ၁ နာရီ ၁၇ မိနစ်မှ ၁ နာရီ ၂၉ မိနစ်ထိ။) ထို့နောက် မုန့်ဟင်းခါး (ငါးဟင်းရည်နှင့် ခေါက်ဆွဲဖတ်)ကို သူ၏ကလေးအငယ် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျွေးမွေးရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သူကကြေငြာသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည် မှော်ဘီစျေးသို့ သွား၍ ချက်ပြုတ်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူမည်။ သူက စျေးနှုန်းများ နှင့် မတူညီသော ဟင်းရည်အိုးအရွယ်အစားအလိုက် ပြင်ဆင်ရသော မုန့်ဟင်းခါးချက်နည်းကို ဖော်ပြပြောဆိုသည်။ ( ၁ နာရီ ၂၉ မိနစ်မှ ၁ နာရီ ၃၇ မိနစ်ထိ။)
Identifier: Ancienne cote: crdo-BER_1964_BUR_023_B
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-3d8068f8-616d-3133-8ec9-c34513d6f061
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/private_bernot/masters/BER-1964-BUR-023-B.wav
Up-to-date as of: Mon Sep 20 14:43:14 EDT 2021